Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo m2ts in wmv?
Qeybta 2: 2 sababaha diinta m2ts in wmv
Qeybta 3: Sida loo Beddelaan M2TS in wmv fudud oo degdeg ah oo ku saabsan daaqadaha
Inta badan dadka isticmaala waxaa ka warqabin xaqiiqada ah in wmv waa ugu dambeeyay iyo qaabka ugu isticmaalay marka ay timaado daaqadaha. Sidoo kale waa in la ogaadaa in inta badan dadka isticmaala ee adduunka ayaa isticmaalaya daaqadaha oo dhan iyo versions of barnaamijkan loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa dadka isticmaala ee adduunka oo dhan oo xitaa marka la barbar dhigo MAC isticmaala daaqadaha waa sameeyo oo faro badan taas oo muujinaysa in dadka isticmaala waxaa ay dhigin dhinaca OS this.
Ugu sareeya laba sababood si loo hubiyo in m2ts faylasha loo rogaa waa sida soo socota. Sidoo kale waa in la ogaadaa in sababaha halkan ku xusan waa kuwa in sidoo kale loo arki karin faa'iidooyinka qaab wmv ah:
Kii u horreeyey ayaa sababta ugu horreeyey si aad u hubiso in m2ts ah waxaa loo baddalaa qaab wmv waa in wmv uu yahay mid yar oo cabbirka oo la hubiyo in xaddiga video ah oo uu soo raagayaan waa isku mid sida dhererka isku mid ah iyo qaab culus ka dhigi kartaa ee m2ts ah. Sidoo kale waa in la ogaadaa in mar qaabka markaas ayaa loo bedelay waxa aad u muhiim ah in la ogaado in ay albaabbadu u waafaqsan daaqadaha la furay in arrintan la xiriira. Si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user daaqadaha ka dibna waxa aad u muhiim ah in la ogaado in qaabkan waa in loo badalaa oo aan wax arrintan iyo dhibaatada la isticmaalayo convertor ugu fiican ee jeer oo dhan.
Waxaa la soo sheegnay in dadka isticmaala daaqadaha ka koobnaan salka IT user weyn ee adduunka oo ku erayo fudud oo macnaheedu yahay inta badan. Halkan yimaado sababta labaad ee diinta qaabka m2ts in wmv. Si loo daboolo saldhigga ugu weyn ee user adduunka oo dhan qaabka m2ts waa in diinta wmv iyo user waa in sidoo kale la hubiyo in ugu fiican in la siiyo nidaamka by ciyaaro qaab sida u fiican ee madal daaqadaha.
Marka ay timaado in wmv waxay u taagan tahay windows media video waana mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan iyo qaab default daaqadaha. Marka ay timaado videos digital si markaas waa qaabka ugu da'da weyn ee arrintan la xiriira iyo users ka adduunka oo dhan waa ay awoodaan in ay isticmaalaan qaab iyo muhiimadda ay leedahay qaab waxaa lagu xukumi karaa by xaqiiqda in ugu dhufto ee kale ayaa sidoo kale lagu qasbay in ay horumariyaan teknoolajiyada sida in loo taageero qaab wmv ee arrintan la xiriira. Marka ay timaado in diinta m2ts in wmv ka dibna ay jiraan sababo dhowr ah inay hubiyaan in qaabab waxaa isku jireen.
Ninba waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican in la hubiyo in diinta aan la sameeyaa oo keliya habka ugu fiican laakiin natiijada kama dambaysta ah sida tayada isku mid oo waxaa loo marnaba wasaqaysanna leh arrintan la xiriira ka dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay in la hubiyo in tallaabooyinka iyo geeddi-socodka oo uu soo halkan ku xusan la raacay sida ay yihiin in la hubiyo in natiijooyinka waafaqsan yihiin shuruudaha iyo waxaa lagu marnaba badala. Hagaha kaas oo lagu hoos ku xusan ayaa loo sameeyey hayo in aragtida ah dalabaadka iyo baahida isticmaala. Inta badan dadka isticmaala daaqadaha ma ka heli doonaa kaliya faa'iidada ka tallaabooyinka lagu xusay hoos ku qoran, laakiin haddii ay jirto waqti soo socda ka dibna user ma yeelan doonaan in ay noqon, in kasta oo kale oo hage iyo tallaabooyinka hoose u adeegi doonaa ujeedada loogu user:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in dajinta barnaamijka la sameeyo hab ugu fiican. Waxa kale oo hubin doona in barnaamijka la geliyo ka dib markii download habboon. Kadib markii geedi socodka la dhamaystiro barnaamijka waa in lagala soo bixi:
2. button files add markaas waa in la sii adkeeyey si dhirtuba files taasoo user u baahan yahay diinta:
3. qaab wmv markaas waa in la soo xulay guddi saxda ah:
4. button diinta ayaa markaas waa in la sii adkeeyey si aad u hubiso in bilowday diinta iyo nidaamka halkan ku xusan hasa
Ugu wanaagsan iyo faa'iidooyinka ugu badan ee la xiriira la xiriira meel sidoo kale ciyaareed ee ka kooban arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la ogaadaa in diinta waa muhiim sababtoo ah waa inuu xaqiijiyo in qaab la bedelo t mid oo ay taageerayaan dhan qaabab waaweyn ee dunida oo dhan. Waxaa sidoo kale la hubiyo in dadka ka heli qaab wixii waa la jaan ku dhawaad ​​90% dadka isticmaala PC dunida oo sidoo kale muujinaya in ratio user daaqadaha waa ka sii badan Mac iyo xitaa Linux . Tutorial ayaa ka dhigi doonaa oo keliya ma aha hubiyo in hababka ugu fiican ee lagu muujiyey in user si loogu badalo qaab m2ts in ay wmv laakiin waxa ay sidoo kale keeni doontaa isticmaalka dhinaca technology oo ku jira gobolka of farshaxanka. Xitaa haddii aynu eegno convertors kale online ka dibna mid ka mid ah in la halkan ku xusan waa mid ka mid ah in uu leeyahay kuwa tayada aan laga heli karaa convertor kasta oo kale oo marka ay timaado waxyaabahan markaas qiimaha uu soo dhigay waa cabsi iyo gobolka farshaxanka, kaas oo sidoo kale la hubiyo in dadka isticmaala ay siiyaan dib u eegista cabsi badan oo fiican in laabtay sidoo. Sida lagu Xusi, ka hor inta ay jiraan sababo dhowr ah oo la beddelo qaabab in lagu sakhiray iyo qaar ka mid ah sababta ayaa sidoo kale si kastaba ha ahaatee ku xusan waxaa lagu sameyn doonaa hubiyo in sababaha ugu fiican yihiin oo keliya ma aha, laakiin waxaa sidoo kale ku xusan sakhiray cinwaanno ah oo kala duwan si ay dadka isticmaala ku awoodaan si loo hubiyo in ugu fiican waxa laga soo qaatay tutorial this arrintan la xiriira. Qaybta labaad ee tutorial this hubiyo in labada sababaha aan soo sheegnay oo kaliya laakiin waxaa sidoo kale sharaxay in arrintan la xiriira ka dhigi doonaa.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan M2TS in wmv daaqadaha